Waji baddali: Sida loo beddel wajahaya in Video
Sidee u beddelo aawadeed in Video
> Resource > Video > Sidee u beddelo aawadeed in Video
Ma doonaysaa kale u beddelo aawadeed qof ee video ah? Waa fud la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Barnaamijkan waxaa ka mid ah feature fool-off ah in si toos ah raad ugu booska iyo wareeg ah madaxa asalka ah ee aad sawirka. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa doorto sawirka doonayo iyo waxa ka codsan in click ah. Markaasaan aad u xaqiijin karaa in la dhex geliyaa doonaa wajiga iyo taam baaxadda caqligiisu. Download hoos ku maxkamad si xor ah u kulmaan bedelka ka kaaftoomi-free wejigiisuna.
1 dejinta aad videos
Si aad u dajiyaan ilaha videos in baddali wajiga this, laba fursadaha u banaan.
Guji "Import" xitaa folder file on your computer iyagii ku soo wada cabbayso
Jiid iyo hoos u clips aad doonayso galay uu furmo suuqa hoose.
Tani software badalka wajiga taageertaa qaabab dhowaad dhammaan video halkaas, si aadan u baahan yihiin inay ka welwelaan arrinta incompatibility marka aad soo dhoofsadaan files galay barnaamijkan. Ka dib marka aad ku dhameysan loading file, si fudud u jiidi oo hoos u iyaga ku Timeline Video ah.
2 Codso fool-off ee click ah
Si aad u samayso bedelka wajiga, muujiyo video clip aad rabto in aad dalbato fool-off on Timeline ah. Xuquuqda waxaa guji dooro "Power Tool". Daaqadda pop-up ka, guji "Toos Off" submenu, ka dibna sax "Codso boodi jaray ee Beats in clip ah" checkbox. Waxaa jira farabadan oo marks funny (Muuse ka mid ahaa) laga heli karaa si aad u soo qaado. Dooro mid ka mid ah sida aad u baahan tahay, iyo waxa si deg deg ah ku riday doonaa madaxyadooda oo ah in la ogaado.
Play hadda waxa, lacag bixisid si aad Wajiyada bedelay dareenka. Barnaamijkan wuxuu si toos ah ula socdaan doonaa mooshin ay ka dhigi wejigooda oo kulan la dhammaataan.
Talooyin: Si loo dhigay Wajigooda kaliya ee aad qayb doonayo of video ah, waxaad samayn kartaa kala video clips galay yaryar hore.
3 Keydso video la bedelay wajiga
Ugu dambeyntii, ka dhacay Abuur inay u dhoofiyaan aad video oo wejigooda bedelay. Daaqadda pop-up wax soo saarka, aad leedahay noocyo kala duwan oo fursado u badbaadin. Qaabab Popular sida wmv, MOV, AVI, MKV, MPEG, MP4, iwm ayaa la heli karaa si ay u soo qaado hoos "Qaabka" tab. Replacer wajiga Tani waxay sidoo kale taageertaa si toos ah uploading aad masterpiece in YouTube la wadaagto asxaabtaada ama xubnaha qoyska, iyo sidoo kale fariin u diray Facebook ama Twitter.
Marka laga soo tago in, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad u aragto dib consoles'ka aad ciyaarta, telefoonada smart, ka dibna dooro halkii horena u qaybiyay ka "Device" tab.
Fiiri hage video ee hoose:
Talooyin Bonus: The software badalka wajiga kaloo ka mid ah Auto Muuqaal Baaritaanka feature, oo waxay ka caawisaa in uu kala jabiyo video clips galay kala duwan marka goobta ay isbedesho. Tani waa weyn oo faa'iido leh marka aad rabto in aad si deg deg ah diirada saartaa aad qayb ka doonayo. Si tan loo sameeyo, oo kaliya xaq u guji clip ah ee shayga saxaarad bidix, dooro "Muuqaal Baaritaanka", ka dibna ku dhuftay "ogaashaha" si aynu u buuxiso inta kale si toos ah.
Sida loo Download Songs ka Shabakadaha for Free
Sida loo Beddelaan MOV (Quicktime) si MKV